Women – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
အမျိုးသမီးရာသီလာစဉ် ဖြစ်ပွားသည့် ‘စိတ္တဇရောဂါ’
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာရာသီသွေးမဆင်းခင်နဲ့ ရာသီသွေးဆင်းစနေ့ရက်တွေမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ စိတ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းကို ဆေးကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ “ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က “ရာသီအကြိုဝေဒနာ လက္ခဏာစု”(PMS)နဲ့ “ရာသီအကြိုစိတ်ညစ်ညူး ရောဂါ”(PMDD)အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရာသီလာစဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ စိတ္တဇရောဂါ (Menstrual Psychotic...
“ငိုတတ်တဲ့ကလေး နို့စို့ရတယ်”ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကလေးလေးတွေငိုတဲ့အခါ သူတို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မိဘတွေက သတိပြုမိသွားလေ့ရှိပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေက သူတို့လိုအပ်ချက်ကို ငိုကြွေးမှုကတစ်ဆင့် ပြသတဲ့အခါ မိခင်တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးရင်းနဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးကြား သံယောဇဉ်ကို ခိုင်မြဲသွားစေပါတယ်။ ကလေးတွေ ငိုကြွေးတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတတ်တဲ့ မိဘတွေစိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...
ငွေကြယ်စင်ယံ မိန်းမကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ ထိတွေ့ခြင်း ရေနွေးငွေ့နဲ့ ထိတွေ့တာကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုပိုးပေါက်ပွားမှု ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ နယူးယော့ခ်က သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကဆိုပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်မှာ သူ့အလိုလိုသန့်စင်ပေးတဲ့ စနစ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ နေပူဆာလှုံခြင်း ဘယ်သူကရော...
မိခင်လောင်းတို့ သိလိုသည့် မေးခွန်းများ
ကလေးအနေအထားမမှန်ရင် ကလေးက အချင်းကြိုးပတ်နိုင်သလား . . . Q. ကျွန်မ ကိုယ်ဝန် ၂၆ပတ်မှာ အာထရာဆောင်း ရိုက်တုန်းက ကလေးက တင်ပါးအောက်ရောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကလေးက အချင်းကို ပတ်သွားနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)...